Guddoomiyaha Baarlamaanka oo sagootiyay arday deeqo waxbarasho helay dalal kala duwan - Latest News Updates
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo sagootiyay arday deeqo waxbarasho helay dalal kala duwan
Guddoomiyaha Baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya Pro Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalladda Muqdishu ku sogootiyay in ka badan 45 arday oo deeq waxbarasho ka helay dowladdaha Kenya iyo Uganda.
Jaamacadaha Nairobi University iyo Makareri, ayey ka kala heleen deeqaha waxbarasho, sida mas’uuliyiinta ay sheegeen.
Pro Jawaari, ayaa ardayda kula dar-daarmay in ay ka faa’iidaystaan fursadan waxbarasho oo ay helen.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare Ismaciil Yuusuf Cismaan iyo xildhibaan Prof. C/raxman Xaaji Aadan Ibi, ayaa labaduba sheegay sida ay muhiim u tahay dhiiragelinta ardayda Soomaaliyeed.
“Waxaan idinkula dar-darmayaa in dalkiina aad wax u soo barataan, waxaan idinka rabnaa in aad dhowrtaan sharafta dalkiina”, sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka Dowladda Federaalka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cusman Jawaari.
Arday badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta deeqo sidan oo kale ah ka hela wadamada saaxiibada la ah dowladda Soomaaliya, waxaana dhawaan ardaydii kaalmaha ka galay imtixaankii dugsiyada sare ay dowladda siisay waxbarasho dalka dibediisa ah.